Fanenjehana mpitsara nanao kolikoly :: Miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny CSM ny Pac • AoRaha
Fanenjehana mpitsara nanao kolikoly Miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny CSM ny Pac
Raharaha fanaovana kolikoly niampangana mpi­tsara iray ao amin’ny Fitsa­rana ambaratonga voalohany eto Antananarivo sy mpanera iray, irak’iry voalohany no niakatra Fampanoavana tetsy amin’ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (Pac)
67 Ha, afak’omaly. Eo am-piandrasana ny fahazoan-dalana hanenjika an’io mpitsara voampanga io any amin’ny Filan-kevitra
ambonin’ny mpitsara (CSM) ny Pac, amin’izao fotoana izao. Nalefa natao andrimaso etsy amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) etsy Ambohibao kosa ilay mpanera, hoy ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Bianco.
Nohazavain’io loharanom-baovao io fa “tamin’ny 16 oktobra lasa teo no nitranga ity raharaha fanaovana kolikoly ity. Olona iray nanan-draharaha tao amin’ny Fitsarana Anosy no nitaraina tany amin’ny Bianco hoe misy mpanera nirahana mpi­tsara mba haka vola an-tapitrisany any aminy ho takalon’ny fanamorana ny raharahany. Niaraka niasa tamin’io olona nitaraina io ny Bianco ary natao ny vela-pandrika nanatrarana an’iretsy farany, izay voatoroka ho mpanao kolikoly. Nampitondraina fitaovana fandraisam-peo miafina ilay olona tokony hanome vola. Nasaina nifanome fotoana tamin’ilay mpanera irak’ilay mpitsara izy, avy eo, mba hanomezana ny vola.
Noraisina feo ny resak’izy ireo, ka izany no porofo nahafahana nampiakatra ny raharaha teny amin’ny Pac”.
Fampandrosoana eny ifotony :: Hosoloina ireo sefo fokontany manao antsirambina ny asany